Shiinaha MDF / Soo-saare HDF iyo Soo-saare | Roc
Isticmaalka Kale ee Gaarka ah
ROCPLEX Dhexdhexaad Cufnaanta Fiberboard (MDF) waa darajo sare, walxo isku dhafan oo ka fiican kan qoryaha adag ee codsiyada badan.
ROCPLEX Dhexdhexaad Cufnaanta Fiberboard (MDF) waa darajo sare, walxo isku dhafan oo ka fiican kan qoryaha adag ee codsiyada badan. Waxaa laga sameeyay fiilooyinka alwaaxda iyo cusbada, Dhexdhexaad Cufnaanta Dhexdhexaad, oo badanaa loo yaqaan MDF, waa mashiin la qalajiyey oo la riixay si loo soo saaro xaashiyo cufan oo deggan.
ROCPLEX MDF (Dhexdhexaad Cufnaanta Fiberboard) way ka xasilloon tahay qoryaha adag waxayna si fiican ugu istaagtaa isbeddelada waa qoyaan iyo kuleyl. Looxyada adag ee alwaaxa ah ayaa sida caadiga ah ballaarin doona oo qandaraas ku yeelan doona si toos ah iyo si toos ahba marka qoyaanka iyo heerkulka is beddelaan. Taas awgeed, armaajooyinka, albaabada iyo gogosha laga sameeyay alwaax adag waxay u baahan yihiin dayactir iyo daryeel heer sare ah.
Waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo ah Jumlada MDF (Dhexdhexaad Dhexdhexaad Fiberboard) alaab ah si loo waafajiyo codsi kasta iyo codsi kasta.
40,000 oo mitir laba jibbaaran oo bakhaar ah oo la keenayo wakhti kasta
Faahfaahinta ROCPLEX MDF
Waji / gadaal: ceeriin MDF Melamine MDF Veneer MDF HPL MDF
Fasalka: AA grade
Midabka: midabka MDF ceeriin, Midabada adag, midabada hadhuudhka qoryaha, midabada qurxoon, midabada dhagxaanta
Xabagta: xabagta E0, xabagta E1, xabagta E2, xabagta WBP, xabagta MR
Dhumucdiisuna: 1-28mm (caadi: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm)
Faahfaahinta: 1220mmX2440mm, 1250mmX2500mm, 915mmX1830mm, 610mmX2440mm, 610mmX2500mm
Mawduuca Qoyaanka: ka hooseeya 8%
Cufnaanta: 660/700/720/740/840/1200 kg / m3
ROCPLEX MDF Faa'iidada
Looxyada 'ROCPLEX MDF'
1.) Awood sare, adadag, xasilooni iyo fudeyd la'aan fudud.
2.) Waxsoosaarka dabiiciga ah, ilaalinta deegaanka ee saaxiibtinimada leh iyo soo saarista qaab-dhismeedka jirka oo hooseeya.
3.) Si fudud loo farsameeyo, iyadoo cidiyaha xoog lagu hayo.
4.) Isku-dhafka labiska iyo cufnaanta.
5.) guryaha acoustic iyo kuleylka kuleylka.
6.) Suurtagalnimada in la adeegsado qurxin kala duwan
ROCPLEX MDF Xirxirida iyo Raritaanka
Looxyada 'ROCPLEX MDF' waxay ku habboon yihiin ka shaqeynta mashiinnada wax shiida, maxaa yeelay waxay leeyihiin qalab farsamo oo isku mid ah.
Awood iyo adkeysi.
ROCPLEX MDF alwaaxdu waa xoog sare, waxay si fiican u xajinayaan qaabkooda, si ammaan ah ayey u hayaan qalabka dhejinta.
Dusha sare ayaa ka fidsan. MDF waxay u oggolaaneysaa rinji tayo sare leh, lamination, cajalado istiikarka qurxinta, veneer iyo daahan kale.
ROCPLEX looxyada MDF ee ceyriinka ah ayaa u adkaysata fangaska iyo noolaha kala duwan, taas oo ka dhigaysa wax soo saarka MDF nadaafad iyo badbaado guriga.
ROCPLEX MDF Codsiga
Manufacture Soosaarida alaabada, Qurxinta, miiska, miiska xafiiska.
Use Isticmaalka burburka.
Qaabaynta, shaashadda, saqafka, kalaqeybsiga (darbiga, loox) iwm.
Guudmarka Dhismaha ROCPLEX MDF
Maaddaama ay jiraan waxyaabo la heli karo iyo awoodda wax lagu shiido awgood, ROCPLEX waxaa lagu soo bandhigi karaa wax yar oo ka duwan oo qeexitaannada gobollada ah. Fadlan ka hubi wakiilkaaga maxalliga ah si aad u xaqiijiso soo-saarka alaabta ee deegaankaaga.
Dhanka kale waxaan sidoo kale ku siin karnaa plywood-ka wax lagu duubo, plywood-ka LVL, iwm.
Waxaan Senso si gaar ah ugu xeel dheer nahay soo bandhigida plywood ganacsi 18mm oo aad u weyn.
Tirada bil kasta Suuqa Badhtamaha-bariga, suuqa Ruushka, suuqa Aasiya ee badhtamaha bil walba.
Fadlan la xiriir kooxdayada iibka si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan alaabada Shiinaha ee loo yaqaan 'MDF'.
Hore: LVL / LVB
Xiga: Guddiga Melamine